१० लाखमा भनेजस्तै घडेरी काठमाडौं शहरमा । घट्यो घडेरीको मूल्य ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/१० लाखमा भनेजस्तै घडेरी काठमाडौं शहरमा । घट्यो घडेरीको मूल्य !
यात्रु बनेर ट्राफिक प्रहरी जब टिकट काउण्टरमा पुगे…